Global Voices teny Malagasy » Mitantara Momba Ny Herisetra Ara-Nofo Tsirairay Amin’ny Bilaogy Ireo Vehivavy Any Bangladesh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jolay 2015 3:23 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Nancy
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Vehivavy maro no novetavetaina sy nampijaliana  tao amin'ny Oniversiten'i Dhaka tamin'ny 14 Aprily nandritra ny fankalazana ny taombaovao Bengala. Naresaka sy nihanaka be nanerana an'i Bangladesh izany, saingy tsy mbola nisy nosamborin’ ny mpitandro filaminana na iray aza ireo voarohirohy.
Tsy zava-baovao any Bangladesh ny herisetra ara-nofo atao amin'ny vehivavy. Araka ny filazan'ny Ain-O-Shalishi Kendra, fikambanana miaro ny zon'ny vehivavy, nandritra ny fe-potoana Janoary- Martsa 2015 dia vehivavy 40 no niharan'ny herisetra ara-nofo ary vehivavy roa hafa no namono tena. Nisy tranganà fanolanana 123 voarakitra, izay nitarika fahafatesana vehivavy 15.  Zazavavy tsy ampy taona eo anelanelan'ny 7 sy 12 taona ny iraika amby roapolo tamin'ireo voaolana
Fa zava-baovao ho an'ny firenena ny tranga tahaka ity ( vondrona lehilahy 30 ka hatramin'ny 40 no nanafika sy nametaveta  vehivavy manodidina ny 20 tamin'ilay fankalazana). Taorian'ilay zava-niseho, nanatontosa Herinandro fitorahana Bilaogy sy niangavy fampidirana hafatra mifandraika amin'ilay fametavetana sy herisetra an-tokatrano ny vovonana bilaogy Bangla Sachalayatan . Mpitoraka bilaogy maro no nandray anjara sy nizara ny zavatra nanjo azy.
Mety mihatra amin'ny ankizivavy sy ataon'ny olona avy ao anatin'ny fianakaviana ny herisetra ara-nofo atao amin'ny vehivavy. Nazavain'ny  mpitoraka bilaogy, Nandini Tilottoma, ny nanjo azy tamin'ny nataon'ny dadatoany :
Mpanoratra iray nasaina  ihany koa no nitantara fa novetavetain'ny iray amin'ny fianakaviana :
Ankizivavy maro ihany koa no iharan'ny herisetra any amin'ny tontolon'ny sekoly. Tantarain'ny mpitoraka bilaogy, Ferrywalla,  ny momba ny iray amin'ireny :
Nanazava ny fomba nanaovana herisetra am-bava nanjo ny reniny tany amin'ny toeram-piasany i Afroz  :
Tantarain'i Dossi  mpanoratra nasaina koa ny fomba miafina nangalan'ny namany azy ho anaty horonantsary :
Nazavain'ilay mpitoraka bilaogy, Bunohas,  ny tsy fahazoan'ny mpiasa vehivavy manohy ny asany noho ny vesatra amin'ny maha-reny azy.
Niala tamin'ny fampianarana tamin'ny oniversite tsy miankina iray i Anika Alam  ka nanomboka nandraharaha. Nozarainy ny fanamby atrehan'ny mpandraharaha vehivavy any Bangladesh :
Nisy lehilahy mpitoraka bilaogy ihany koa nandray anjara tamin'ity fanentanana ity. Nasongadin'ilay mpitoraka bialogy, Hasib,  ny fanavakavahana amin'ny maha-lahy sy maha-vavy aminà fampidirana mpiasa. Nohadihadiany ny angon-drakitra tao amin'ny “BDJobs”, ilay haban-tranonkala malaza mikasika ny asa any Bangladesh :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/02/71131/
 Vehivavy maro no novetavetaina sy nampijaliana: https://globalvoicesonline.org/2015/04/22/bangladeshis-stand-up-to-sexual-violence-following-new-years-assaults/
 nisy nosamborin’: http://newagebd.net/120236/cpb-women-leaders-demand-immediate-arrest-trial-of-the-attackers/#sthash.rVwufZNM.dpbs
 tranganà fanolanana 123 voarakitra, izay nitarika fahafatesana vehivavy 15. : http://www.askbd.org/ask/2015/04/01/violence-women-rape-january-march-2015/
 nanafika sy nametaveta: http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/20/c_134166759.htm
 Mpanoratra iray nasaina: http://www.sachalayatan.com/guest_writer/54331
 Dossi : http://www.sachalayatan.com/guest_writer/54332
 Anika Alam: http://www.sachalayatan.com/guest_writer/54422